Waxaan si ku meel gaar ah u joojineynaa faallooyinka adoo adeegsanaya JetPack | Laga soo bilaabo Linux
Marka la eego isbeddelada aan ku sameyneyno naqshadeynta baloogga, waxaan si ku-meelgaar ah u naafonnay isticmaalka faallooyinka illaa JetPack, sidaa darteed laga bilaabo hadda, waxaad isticmaali kartaa laba siyaabood oo aad ku faallooto:
Xogtayada oo gacanta lagu dhigo:
Ama adoo iska diiwaangelinaya goobta si aad uga soo ururiso xogta boggayaga:
Waxaan eegeynaa sida loo dhexgalo faallooyinka asalka ah ee baloogga, iswaafajinta adeegyada dhinac saddexaad sida Facebook, Twitter, Google iyo kuwa kale, iyadoon loo baahnayn in laga faa’iideysto JetPack. Marka lagu daro isticmaalka aan keydin doonno, uma baahnid baahida aan uga dalbanno dalab degel kale (sida ay hadda u dhacdo) si aad u hesho foomka faallooyinka.
Waxaan kaa raali galineynaa dhib kasta oo kaa dhalan karta taas, waxaana rajeyneynaa inaad fahantay inaan sameyneyno isbedelladan kaliya si aan u wanaajinno khibradaada adeegsiga bartayada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Waxaan si ku meel gaar ah u joojineynaa faallooyinka adoo adeegsanaya JetPack
Halleeluuya Weligay ma jeclaan Jetpack. Waxaan u maleynayaa inay jiraan waxyaabo kufilan oo iskuxira adoo adeegsanaya adeegyada qaarkood, hubaal waxaad heli doontaa mid kugu habboon baahiyahaaga 🙂
Halleeluuya! Aynu aragno haddii aan mar horeba isticmaali karo faallooyinka nest ...
UGU DANBEYN! OH haa! 😀
Maaha inaan necbahay JetPack, laakiin waxaan rajaynayaa qofkii abuuray modulekaaga faallooyinka inuu ku jahannamo Naarta. 🙂
Fidintaan (plugin) waxaa abuuray Automattic: kooxda sameysay WordPress lafteeda.
@Carlos-Xfce: Nacalaa waqtigii uu San Matt ku dhacay inuu naf siiyo naftiisa. ¬¬
@Carlos-Xfce: Waxaan ula jeedaa JetPack, ma ahan WordPress aan jeclahay. 😉
hahahahaha, si fiican u noolow faallooyinka nest!
Waxaan isku dayi doonaa faallooyinka guryaha ku yaal, maadaama aysan aniga sidoo kale ii shaqeyn
wax walba waa in la hagaajiyo barta 😉
Waxaan jeclahay qaabkan sida ugufiican ee wax loo faalleeyo, taas oo ah, koonto la igu qoray.
Boggan maalin walba wuu soo fiicnaanayaa !!! Waan kugu hambalyeynayaa! 😀
boostada imtixaanka (iyada oo aan jetpack)
Waxay umuuqataa inay wali siinayso pachanga userAgent laakiin haday tahay markii ugu horaysay markay kulahayeen dhinaca dhinaca hadii ay aqoonsan tahay Debian ???
Waxaad si khaldan u qaabeeysay kanaga Wakiilka isticmaalaha, baadhid tan.
Marka hore waxaad arkaysay astaanta Debian maxaa yeelay Widget oo ka mid ah galeeysid Ma aysan shaqeyn oo kaliya waxay muujisay astaantaas iyadoon loo eegin nidaamka aad isticmaashay.
By the way, hadda oo aad lajirto horumarinta nashqada cusub, markale ayaan ku celinayaa taladan aan sameeyay si looga fogaado su’aalo badan oo ku saabsan wakiilada isticmaalaha.
Heck xiriiriyeha ugu horreeya ee khaldan, mid sax ah ayaa ah tan.
Midda labaad way fiicantahay laakiin baarka dul sabeynaya ma muujinayo faaladeyda, waa inaad wax yar sameysaa laab kor. Haddii aad u baahato shaqo badan, taasi waa wax kale oo la saxo, KZKG ^ Gaara, LOL.
Haa haa sax, waa inaad xoogaa rogrogtaa ... mmm waan arki doonaa haddii la xallin karo, maxaa yeelay markii xiriir toos ah loo fidiyo faallo si toos ah loo furo, uma maleynayo inay jirto wado lagu sheego oo ay ku socoto faallooyinka laakiin aad 20px ka sareyso 🙁
Markuu shaqaalaha dhismaha ka baxo macnaheedu waa in UserAgent aan la aqoonsaneyn, PNG-ga shaqaaluhuna wuxuu xiriir ku leeyahay boostada: Laga soo bilaabo Linux waxay ka ogaaneysaa walxaha aad u isticmaasho inaad ku booqato
Waxay noqon doontaa oo keliya lagama maarmaan in lagu daro qoraalkaas aad soo jeedinayso ama wax la mid ah 😉 ama maya?
Waxaan dhihi lahaa qoraalkaas wuxuu ka muuqan lahaa astaamaha hoostooda oo dhan, maxaa yeelay waxaa jira dad badan oo ka cawda inay ku tusayso khalad qaldan (inta badan Ubuntu marka la isticmaalayo Mint, ama ninka yiri adeegso Arch oo tusay Windows, iwm).
Weli dhibaato ayaa kaa haysata faallaynta? O_o
Ugu dambayntii waxaan mar labaad helayaa ogeysiisyada jawaabta ra'yigayga iyo ogeysiisyada ku saabsan faallooyinka cusub!
Fadlan, ka tag si ay u hagaagsan tahay 🙂
HAHAHA haa haa, waxa ugu nabdoon ayaa ah inuu sidan ku sii jiro ... 99% itimaalka in aan uga tagno sidaan this
Waxaan kudaray codkeyga si aan uheysto ikhtiyaarka akoonada maxaliga ah. Tan iyo markii Jetpack la bilaabay in la isticmaalo, in ka badan hal munaasabad ayaan u soo diray faallooyin aan muuqan (Waxaan u maleynayaa dhibaatooyinka xagga xiriirka gaabiska ah, wakiillada, waxkastoo)
Aniguna waxaan ka faa'iideystaa fursad aan ku muujiyo faahfaahin ah in qof horeyba uga faalooday boostada ku saabsan isbeddelka naqshadeynta: xariiq kala soocaya inta udhaxeysa faallooyinka ayaa waxtar yeelan doona, ama wax la mid ah oo waxoogaa iftiiminaya xadka u dhexeeya midka iyo kan kale.
Sideedaba, xilligan maxay ku kala duwan yihiin "akhristaha" iyo "isticmaale" (malaha waa inay noqotaa "isticmaale")?
HAHAHA horay usoco hahaha, waxaan ku sharixi doonaa isbadaladaan qoraal ah in berri ama maalinta ku xigta aan soo dhajin doono haha.
Xilligan la joogo, Akhriste = Akhriste ama booqde isticmaalaha, Isticmaalaha = Isticmaalaha ka diiwaan gashan goobta.
Isticmaaluhu ma noqon doonaa midka ka diiwaangashan goobta iyo akhristaha ugu dambeeya akhristaha?
Isticmaaluhu waa midka ka diiwaangashan goobta, akhristaha ayaa ah booqdaha (mid caadi ah ama mid aan ahayn) laakiin aan diiwaangashanayn.
Tani waxay leedahay bogag furan muddo dheer ...
Waa wax weyn, laakiin kama bixi karo 30ka tab ee furan isla waqtigaas, waan waalanahay, arrghhh !!! hahaha
Haa, waxaan u maleynayaa in faallooyin kastaa ay ahaadaan kuwo si cad u qeexan ... waxaan arki doonaa waxa la go'aaminayo dhamaadka, maxaa yeelay waa inaan qaboojisaa nuqulka mawduuca mar iyo dhammaan hahaha.
Barafow Muddo dheer adoo isticmaalaya Debian ayaa saameyn kugu yeeshay. Maxaa ku khaldan mawduuc sii deynta sii deynta? 😉
HAHAHA waa nooc ka mid ah mawduuca waa in la qaboojiyaa, si looga shaqeeyo midka cusub.
In kasta oo aan doorbidayo mawduuca inuu rogrogo ... lammaanaha naga caawiyay barnaamijyada mawduuca wuxuu doorbidaa inuu noqdo iyada oo loo marayo qaabab deggan oo horumar leh.
Kahor intaadan "qaboojin" (sida tarjumida xun ee halkaas ka jirta) naqshadeynta, talo kale ayaa igu soo dhacday: mid ka mid ah waxyaalihii badnaa ee aan ka jeclaaday mowduucii hore waxay ahayd, markii tafatiraha uu faallo ka bixinayo soo galitaan uu isagu lahaa makiinad, iyadoo aan loo eegin darajada isticmaalehaaga, faallooyinkaaga waxaa lagu muujiyey magenta. Waxay ila tahay in shaqadan la soo ceshan karo, iyadoo la badalayo qoraalka hada u muuqda qorayaasha "tifaftire", oo isku mid ah asalkiisa buluuga ah, isla markaana ka dhigaya qoraaga soo gelitaanka inuu leeyahay qoraal oranaya "qoraa" asalka magenta , sidaas.
Halkaas waxaan sidoo kale ku tarjumay "isticmaale" "isticmaale" maxaa yeelay waxay umuuqataa wax aan caqli gal ahayn in qoraallada qaar ay ku qoran yihiin Isbaanish kuwa kalena Ingiriis.
Oh fikradda ma xuma 😀
Waxaan ku qoraa ToDo-ga nooca xiga ee dulucda 🙂
Waxaan arkaa inay ku dabaqeen taladaydii. 😀
Laakiin midabada buluugga ah ee tifaftireyaasha iyo qorayaasha ayaa aad isugu eg oo wareersan. Maxaa diidaya in qoraayaasha loo dhigo asalka magenta iyo tifaftireyaasha asalka buluugga madow ee sidii montage aan sameeyay? Marka way sahlan yihiin in la garto.
Haa, talladaada iyo tan isticmaaleyaasha kale. Durba KZKGGaara ayaa maqaal ka qoraysa ..
Haye ragga .. Goorma ayaad ballaadhinaysaa ama aad beddeli doontaa ilaha faallooyinka?
Anigu garan maayo nooca font-kani yahay, laakiin waa wax aad u dhib badan in sidan oo kale loo akhriyo, waxay qaadataa xoogaa buro badan iyo noocyo xaraf ah ... (waa fikrad) ..
Dhamaan waad salaamantihiin 😉
Oo loogu talagalay Yoyo -> Solusdos xD ahahaha
Waxaan horay u waasicinay O_O.
Way kufiican tahay sidan
maxay u isticmaali waayaan disqus? AMA:
Waa wax aad u yar oo la beddeli karo, iyo sidoo kale, maxay faa'iido u keeni kartaa?
U jar si aad si fiican u fahamto Crontab